Ny herinandro voalohan’ny taona 2006 ao amin’ny bilaogy Maraokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2018 8:30 GMT
Tonga ny 2006, ka tratry ny taona vaovao avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Maraokana.
Taorian'ny iray volana tsy hita, dia tafaverina i Larbi. Ity blaogy ity no azo antoka fa tena malaza indrindra eo amin'ireo bilaogera Maraokana ary ankoatra ireo lahatsorany manakiana, dia manome tolotra ho an'ireo mpamaky azy koa izy. Ary vao avy nitsidika an'i Larbi aho mba hahalalako ny adiresin'ireo blaogy Maraokana voasoratra tao anaty lisitra tsy tapaka vaovao.
Tamin'ny lahatsorany farany, tsy nankasitraka ny fanambarana vao haingana nataon'ny Minisitry ny fitsarana Maraokana Mohammad Bouzoubaa hanangana rafitra fanaraha-maso ireo famoahana an- gazety rehetra i Larbi. Mahagaga fa tsy taitra mikasika ny fanapaha-kevitra toy izany ireo fanehoan-kevitra tamin'ity lahatsoratra ity ary nifantoka indrindra tamin'ny fanamelohana ny mpanao gazety Maraokana.
Mbola ao anatin'ny hetsika nasionaly ihany, raha niahiahy fanehoan-kevitra lehibe avy amin'ireo bilaogera Maraokana tamin'ny didim-pitsarana ho an'ny Tel Quel aho, dia bilaogy vitsy monja no niresaka izany tamin'ny herinandro lasa.
Iray amin'izy ireo, ary mety voalohany nitatitra ny vaovao momba ny Gazetiboky Marokana ny Bluesman izay nanoratra fotsiny ny sazy navoakan'ny fitsarana tao amin'ny lahatsorany raha nangataka ny mpamaky azy tao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra izy mba haneho fanohanana “mafy” ho an'ny Tel Quel.
Fanehoan-kevitra momba ny fisamborana an'i Ayman Nour
Mandritra izany fotoana izany, nahomby kokoa tamin'ny fisarihana ny sain'ireo bilaogera Maraokana tamin'ny herinandro lasa ny sazin'i Ayman.
Amazigh manasokajy ny fisamborana an'i Nour ho tsy nampoizina tanteraka tamin'ny faran'ny taona 2005, ary nanoratra tao amin'ny lahatsorany “Purelyt Arabica: dimy-dimy”! fa raha manana 5 taona hitondrana an'i Ejipta i Husni Mubarak, dia tsy maintsy mizaka izany dimy taona izany any am-ponja kosa i Nour.
Tsy te-hianatra ny fitsipika vaovao ireo mpanao didy jadona ireo no sady tsy te handao ny toerany ho an'ny tanora sy ny toe-tsaina vaovao
Nofaranan'i Amazigh ny lahatsorany fa ny hany fomba ahafahana manana fifidianana demokratika ao amin'ny firenena arabo dia ny miandry ny filohany ho faty na ialàn'ny Amerikana.
Karim kosa manana hevitra hafa momba ny fisamborana an'i Ayman Nour, ary hoy izy ao amin'ny The Arab Observers: raha nosamborina i Ayman Nour, dia noho ny governemanta Ejiptiana tsy maintsy mahatsapa fa ao anaty toerana matanjaka izay ahafahany manao izany tsy amin-tahotry ny tabataba iraisam-pirenena.
Araka ny hevitro, porofo izany fa mbola ilaina i Ejipta ho toy ny iray amin'ireo mpiara-miasa lehibe amin'i Washington amin'ny ady amin'ny fampihorohoroana. Noho izany, amin'ity tranga manokana ity, mety hanatsoaka hevitra indray isika fa ny fampitahorana ny fampihorohoroana dia vao mainka nanamafy ny fitondrana arabo mpanao famoretana sy ny mpiara-dia tandrefana, fa tsy ny zavatra tadiavin'ireo ekstremista.
Iray amin'ireo bilaogy ankafiziko indrindra ny The Arab observers ary miavaka amin'ny fahazoana mpamaky marobe samy manana ny mahaliana azy. Ny antony lehibe dia mitoetra ao ambadik'ireo sehatra samihafa izay atolotr'i Karim sy Jallal, mpanoratra ny bilaogy ho an'ireo mpamakiny.
Mahita ny pejy voalohany izay manome hevitra ny lahatsoratra vao haingana azonao hidirana ao amin'ny iray amin'ireto sehatra ireto ianao: Politika Islamika, Zava-mitranga ankehitriny, Olana Maraokana, Lohahevitra sy Boky samihafa.
Ny lahatsoratra momba an'i Ayman Nour no fizarana Zava-mitranga Ankehitriny, ary ny tena lohaheviny dia momba an'i Mona El Talhawi izay sahiran-tsaina noho ny namoahany sombina soso-kevitra tao amin'ny International Herald Tribune, izay nanehoany tsikera marobe momba ny fifidianana tany Ejipta .
Mitatitra ny The Arab observers fa nampanantsoina tamin'ny fivoriana miaraka amin'ny manampahefana Ejypsiana i Eltahawy, nandritra ny fotoana nilazana azy fa arahin'ny governemanta egyptiana maso ny fihetsiny.
Momba an'i Iràka sy Palestina
Geronium “mikiakiaka” ao amin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Ho fahatsiarovana ny Vono olona tao Fallujah” ny hatezerany noho ny famonoana sivily izay nitranga (nitranga ?) tao Fallujah. Hoy izy ao amin'ny fampidirana ny lahatsorany:
Inona no azoko ambara?
Fankahalana ve izany? Fanaintainana ho an'ireo olona ireo ve izany? Fahatezerana amin'ny Amerikana ve? Tsy fantatro. Fa ny azoko antoka dia hoe tsy misy teny hanehoana izany fahatsapana izany ao am-poko izany. Ny amin'ny inona ? Ho an'ny ady any Fallujah.
Tsy te hankahala ireo Amerikana aho fa ny marina hoy aho, tena sarotra ny mitia olona tafiditra amin'ny famonoana olona sivily.
Lili manome ny mpamaky azy ny bilaoginy amin'ny Frantsay Etre soi meme , tontolo ho an'ny krizy Israely-Palestina, ary mangataka azy ireo hamaky bebe kokoa momba ity lohahevitra ity izy satria heveriny fa adidin'olombelona ny mahalala ny marina.
Tena mila mitsidika bilaogy Maraokana maromaro aho mba hahitana mazava ny toetran'ny bilaogy Maraokana. Saingy, araka ny efa hitako dia azoko lazaina fa 60 isanjaton'ny bilaogera Maraokana no zatra kokoa amin'ny karazana mahagazety ny bilaogy.
Crucivore dia bilaogy iray azoko ambara ho toy ny manam-pahaizana, na dia toa tsy mieritreritra izany aza ny mpanoratra azy 😉 . Ny herinandro lasa teo dia namoaka boky mitatitra zava-misy tena izy mahatsikaiky i crucivore. Antsoina hoe “Mihomehy fotsiny mba tsy hitomanianay” izany.
Ary indro ny tsiron'ireo tantara sasany izay ho hitanao ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “tantara tena nisy.”
Lehilahy miteny amin'ny vadiny:
Ahoana no namoronan'Andriamanitra anao ho tsara tarehy sy adala?
Andriamanitra dia nahary ahy tsara tarehy mba hisarika anao, ary adala mba ho voasarika aminao.
Misy ihany koa ny fironana haneso ireo hetsika ara-politika na ara-tsosialy amin'ny fomba ataon'i Anima. Manana mpijery marobe ny “andian-tantarany” momba ny mpivady iray izay toa very nandritra ny fiezahana hahafantatra zava-mitranga manodidina azy. Ary miangavy azy izy ireo ankehitriny mba hanohy hanoratra momba ny “Oum al yal” sy “Ab al'yal” satria nanambara tamin'ny lahatsorany farany izy fa tonga amin'ny fiafarany ny fianjorian'ireo mpivady malaza, miangavy azy (vehivavy) ihany koa aho mba… ahemmmm
Izay no tamin'ity herinandro ity. Amin'ny Alarobia indray, Inshallah!